Miyey kooxda Arsenal wadahadal heshiis kordhin ah la fureysaa Danny Welbeck?… (Macallin Unai Emery oo ka jawaabay) – Gool FM
“Isma dhiibi doono, waxaana u baahanahay taageeridiina” – Piqué oo fariin u diray taageerayaasha Barcelona
“Tani waa sababta ay Manchester United u tahay meesha ugu fiican ee uu Ronaldo aadi karo” – Luís Figo
Sidee ayuu Koeman uga hadlay barbarihii niyadjabka lahaa ee Barcelona ay la gashay kooxda Cadiz?
Kooxda Barcelona oo hal dhibic kala soo laabatay Garoonka Nuevo Mirandilla oo ay booqatay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Cadiz iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
“Koeman waa tababaraheena, dhammaanteena waan ka danbeyneynaa” – Laporta
Kooxda Real Madrid oo markaan diiradda saaratay daafac ka tirsan Liverpool… (Waa kee?)
Andres Iniesta oo filaya in Xavi uu qaban doono shaqada Tababarenimo ee Kooxda Barcelona
Halyey Carles Puyol oo farriin u diray Barcelona kaddib xilliga adag ay ku jirto kooxdiisii hore
Alexandre Lacazette oo ka dhiidhinaya inuu qandaraas cusub u saxiixo Arsenal & mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn Yurub oo xiiseyneysa saxiixiisa
Miyey kooxda Arsenal wadahadal heshiis kordhin ah la fureysaa Danny Welbeck?… (Macallin Unai Emery oo ka jawaabay)
Haaruun March 31, 2019
(London) 31 Maarso 2019. Macallin Unai Emery ayaa daboolka ka qaaday in Arsenal ay qorsheynayso inay heshiis cusub ku abaal-mariso ciyaaryahankeeda Danny Welbeck.
Gunners ayaa sida tababaruhu sheegay doonaysa inay heshiis cusub ka saxiixato Welbeck ka hor dhammaadka xilli ciyaareedkan, kaddib markii uu weeraryahankan dib ugu soo laabtay tababarka.
28-sano jirkaan ayaa ka jabay canqowga midig bishii November intii lagu guda jiray kulankii ay barbaraha la galeen Sporting Lisbon ee Europa League.
Inkastoo aysan u badnayn inuu dib garoomada ugu soo laabto xilli ciyaareedkan haddana macallin Emery ayaa soo jeediyey inuu horumar sameynayo.
Unai Emery waxa uu sheegay inkastoo uu weerarkiisa ku haysto Alexandre Lacazette iyo Pierre-Emerick Aubameyang ay weli doonayaan inay kooxda ku sii haystaan Welbeck oo ay la furi doonaan wadahadal heshiis kordhin ah.
Macallinka reer Spain kaasoo kooxdiisa Gunners ay Isniinta berri ah la ciyaari doonto Naadiga Newcastle ayaa sheegay in koox walba oo Ingiriis ah ay u baahan yahay ciyaartoy Ingiriis ah sidaas darteed heshiis cusub ay ka saxiixan doonaan Welbeck.
"Wax layaab ah ma'ahan bandhigyada uu sameynayo Lionel Messi"
Kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid oo ku soo biiray doonista mid ka mid ah xiddigaha ka ciyaara horyaalka Premier League